नेपाल सरकारभन्दा 'चौकुने'को नियम कडा !
घाटगाउँ खबर मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०२:१६:००
४ कार्तिक, सुर्खेत । कोरोना भाइरसको महामारी चौपट छ । जताततै यसकै चर्चा छ । यसकै चिन्ता र चाँसो छ । कतिलाई डर छ । कतिलाई आराम छ । अनि कतिलाई यसले आर्यघाट पुर्याएको छ भने कतिलाई अस्पतालको आईसीयुमा पुर्याएको छ ।
तर पनि कोरोना भाइरसको असर दैनिक बढ्दो छ । कहिले घट्ने हो ? टुंगो छैन् । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले युरोप अमेरिका हुदँै भारत र नेपाललाई समेत आच्छु आच्छु पारिसकेको छ । यसको बढ्दो महामारी रोक्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइरहदा संसार ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
तर यसबारेका प्रोटोकल देशपिच्छे फरक फरक ढंगले चलिरहेको छ । सामान्यतया धेरै देशको प्रोटोकल मिल्दोजुल्दो भएपनि यसलाई लिने र गर्ने कडीकडाई फरक फरक छ । चीन कोरोना रोक्न पूर्ण रुपमा सफल मात्रै छैन्, उसले निकै कडाईसँग यसको निर्मूल पार्न सक्षमता देखायो ।
तर पछिल्लो समय नेपालमा भने लापरवाही बढ्दो छ । कोरोना शुरु भएदेखि अहिलेसम्म सामान्यतया २५ जनाभन्दा धेरै जम्मा हुन नदिन प्रोटोकल नै तयार पारिएको छ । नेपाल सरकारले देशभर २५ जनाभन्दा धेरै जनाको भेलालाई प्रतिबन्ध गरेको छ ।
कम्तीमा २५ जना जति भेला हुँदा भने ठूलो कडाई गरेको छैन् । तर नेपाल सरकारलाई नै चुनौति दिदै सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने अनौठो प्रोटोकल सार्वजनिक गरेको छ । चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं. ९ र १० का जनप्रतिनिधिले १० जनाभन्दा बढीलाई भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
वडा नं. ९ र १० अर्थात साबिकको घाटगाउँका नेता एवं जनप्रतिनिधिले १० जनाभन्दा धेरै भेला हुनेलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्ने पनि ठोकुवा गरेका छन् । जबकी नेपाल सरकारले नै २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने र राम रमाइृलो गर्नेलाई संक्रामक रोग अन्तर्गत कारवाही हुने व्यवस्था रहेको बताउँछ ।
तर एउटा गाउँपालिकाको एउटा अर्थात दुई वटा वडाले १० जना मात्रै भेला हुँदा कानुनको डण्डा लगाउँछु भन्नु कत्तिको हास्यास्पद हो ? एक पटक होइन, दुईपटक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले कसरी यसलाई नियम बनाउँछन् ?
चौकुने ९ का वडाध्यक्ष नवराज आचार्य र चौकुने १० का वडाध्यक्ष शंकर विश्वकर्मा (कामी) लगायत आधा दर्जन नेता कार्यकर्ताको हस्ताक्षर रहेको संयुक्त विज्ञप्तीका केही बुँदाले साच्चै उनीहरुको सोचप्रति दया देखाउनुपर्ने अवस्था छ ।
जनतालाई प्रतिबन्ध, नेता र कार्यकतालाई छुट
अहिले दशैँ तिहारको मुखमा जनतालाई भेला हुन नपाईने नियम जारी गर्ने तिनै नेता हुन्, जो केही महिनाअघि तिब्र गतिमा कोरोना भाइरस फैलिदै गर्दा दर्जनौको संख्यामा (१० जना मात्रै होइन, २५ जनाभन्दा धेरैको उपस्थितिमा) टोल समिति गठन गर्दै हिडेका थिए ।
कोरोना सोरोना केही होइन भन्दै मनलाग्दी कोरोनाको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने नेताहरुले त्यतिबेला सबै मापदण्ड र प्रोटोकल मिचेर, कतिसम्म भने मुखमा मास्क समेत नलगाई दलीय टोल समिति गठन गरेका थिए ।
तर अहिले जनतालाई फेरि १० जना मात्रै भेला हुँदा पनि कानुनको डण्डा बर्षाउने धम्की ? यो सोच र नियम कत्तिको विवेकपूर्ण हो ? या त अराजक हो । हिजो स्कुलमा विद्यार्थी पढाउँदा सामाजिक दुरी र मास्क अनिवार्य गर्ने । तर आफू कार्यकर्ता भेला गर्दा भेडा हुले जसरी गर्ने ?
अनि अहिले फेरि जनताको लागि, स्वास्थ्यको लागि, महामारीबाट बच्नका लागि हो भनेर तर्साउने ? त्यसैले गाउँमा छोटे राजाको झल्को दिने नेता तथा जनप्रतिनिधि ज्यु, पहिला आफूलाई नियम र नैतिकतामा बाध्नुस ।
कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुस, अनि जनतालाई नियम सुनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्वकर्ता वा सहयोगी बन्नुस । होइन भने यस्ता बकम्फुसे कुरा गरेर जनता तर्साउने नौटंकी बन्द गर्नुस ।
अहिले कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने तरिका नागरिकलाई पनि थाहा छ । उनीहरु पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । चिन्तित छन् । कति पीडित पनि छन् । कति सक्रमित छन् । र पनि आवश्यकताले, बाध्यताले, सकी नसकी आफ्नो पेट पाल्न, घर परिवारको खुशीलाई छातीमा राखेर ज्यान हत्केलामा भएपनि गाउँघर फर्किएका छन् ।
कम्तीमा उनीहरुका अगाडी घरमै आइसोलेसन बस्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुरा नमूनापूर्वक पालना गरौँ । न कि अरुलाई नियम सिकाउने नेता र जनप्रतिनिधि नै कोरोनालाई भद्दा मजाकमा उडाएर जग हसाउने काम चाँही नगरौ ।
घाटगाउँमा १० जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने
महामारीमा टोल समिति गठन, बेमौसमी बाजा !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०२:१६:००
चौकुनेका युवक रावलको दक्षिण कोरियामा मृत्यु मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०२:१६:००
पन्त र शाहीको हातमा रविन्द्र स्मृती ब्याडमिन्टन प्रथम पुरस्कार मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०२:१६:००
भेरी कर्णालीको दोभान विकास गर्ने कहिले ? मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०२:१६:००
हुम्लामा खाद्यान्न अभाव मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०२:१६:००